Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje: Wasiir aan Guri Cusub loo Goglayn! – Radio Daljir
Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje: Wasiir aan Guri Cusub loo Goglayn!
Agoosto 20, 2017 3:35 b 2
Aan marka hore afeefano: Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje waxa uu Radio Daljir iyo bahda Daljir la soo dhaqmay oo hawada Daljir joogto ku ahaa illaa iyo biloowgiisii siyaasadda. Waxa uu saaxiib dhow la yahay badanaa maamulka Daljir. Sidaas darteed, afeeftu waxa ay ka tarjumaysaa aqoon hore iyo la dhaqan hore oo Md. Dhaqaaje, ee marna ma aha saadaalin timaadadiisa siyaasadeed.
Haddii aan soo koobno taariikhda Md. Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje, waxa uu sannadkii 1968 ku dhashay Qardho; waxbarasho waxa uu ka galay isla Qardho. Dugsiga Sare asna waxa uu kaga baxay Shiikh Bashiir Sare, Burco. Jaamacadda waxa uu heerka koowaad kaga baxay Puntland State University, Garoowe.
1988 illaa iyo sannadkii 2005 waxa uu noqday ganacsade dalka ka shaqaysta, biilka reerkana aan meel kale ka raadin.
Sannadkii 2005, markii uu arkay, darsayna in uu garab u noqon karo dadka iyo dalka Puntland, waxa uu u soo jaleecay dhanka siyaasadda oo waa uu tartamay, kuna guulaystay in uu noqdo Xildhibaan Golaha Shacabka Dawladda Puntland, lagana soo doorto Gobolka Bari. Waxa uu Xildhibaan shacab ahaa illaa iyo sannadkii 2014.
Md. Dhaqaaje oo muujiyey in uu u heellanyahay hormarka bulshada, kana duwanyahay siyaasiin badan oo nolasha baalka ugu horreeya ka bilaaba siyaasadda, kahor inta aysan reerka biil u helin, waxaa bishii Aktoobar 2015 loo magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Karkaar.
Guddoomiye Dhaqaaje waqtigii koobnaa oo uu ahaa Guuddoomiyaha Gobolka Karkaar, waxa uu bulshada Karkaar, siiba magaalada Qardho, miiska la shir tagay waxqabad lagu faano, kana fayoobaa musuqmaasuq iyo nin-jeclaysi.
Md. Carshe waxaa lagu ammaanaa, bulshada reer Karkaar iyo reer Puntland oo dhanna ay ku xasuusan doonaan:
1. Markii Shabaabku soo weeraray xeebaha Puntland, siiba deegaanka Suuj iyo Garmaal, Md. Dhaqaaje waxa uu ahaa masuulkii ugu horreeyey Puntland ee furinta buraashad u dhaansada, asaga oo isla maalinkiiba bilaabay hagidda iyo taakuleynta ciidamada difaaca Puntland, ha ahaato biyo, cunno, iyo daawo. Waxa uu tusaale u noqday masuuliyiinta kale ee Puntland in ay ayana ku deydaan Md. Dhaqaaje. Inta kale waa taariikh!
2. Abaartii SIMA markii dad iyo duunyo ay baad iyo biyo beeleen; markii laga soo haajiray Soomaaliya dhan walba; markii loo soo haajiray Bari iyo Karkaar, Md. Dhaqaaje waxa uu mar kale tusaale u noqday reer Puntland iyo Soomaali oo dhan. Huggaanka Md. Dhaqaaje, gurmadkii ummad nabi oo dhan isugu timid, hal qof kuma dhiman, hal qofna kuma dhaawacmin, qabaa’il iskama hor-imaan, kuwa kale iskuma dhicin, hal qofna laguma takoorin. Inta kale ayana waa taariikh!
3. Dib-u-dhiska, dayactirka, iyo hagaajinta magaalada Qardho, dhan dhisme, dhan kaabayaal dhaqaale, iyo dhan hormar waa markhaati-ma-doonto, waana mid ay markhaati u wada yihiin bulshada Qardho. Ayada oo aan meel fog laga dayin, Qardho 2017 waa magaalo wax badan ka duwan, kana hormarsan Qardho 2014.
Waxqadab lagu taamay, lana wada arkay, shacab iyo siyaasi dabadeed, 7dii Agoosto ee sannadkaan 2017, Madaxweyne Gaas oo si gooni ah awalba ula socday dhaqdhaqaaqa Md. Dhaqaaje, shacbiyadda uu kasbaday waqtigaas koobnaa, iyo waliba guulihiisa Gobolka Karkaar iyo difaaca Puntland, waxa uu Md. Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje u magacaabay Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Dowlada Puntland.
In kasta oo ay habboontahay in taariikhda masuuliyiinta u adeega ummadda laga sheekeeyo, la baro shacabka, laguna dhex faafsho bulshada ay u adeegaan; saas oo ay tahay haddana taariikhdu waa wax kooban, qormadaan Daljir ayana dulucdeedu taariikh ka weyn, oo muhiimaddu waa in aan idin la qaybsano waxa uu Md. Carshe Dhaqaaje ugu duwanyahay siyaasiyiinta sannadahaan dalka soo cagadhigtay, badanaana aan aqoon durugsan u lahayn dadka iyo dalka ay rabaan in ay u adeegaan.
Sidaas darteed aan idin la qaybsanno 5 qodob oo Md. Dhaqaaje uga duwanyahay siyaasiyiinta sannadahaan:
1. Waa daljoog aan lahayn baasaboor uu dalka uga dhoofo markii dadka iyo dalku u baahanyihiin, sidii loogu baahday dagaalkii Suuj iyo Garmaal; iyo sidii loogu baahday gurmadkii abaarta SIMA
2. Waa daljoog gurigu u goglanyahay, haddii Wasiir loo magacaabayna aan golol, sariir, iyo firaash toona loo baadigoobin oo gogoshu ay gurigiisa ugu dhantahay
3. Waa daljoog biil, caymiska caafimaadka reerka, iyo fiiga iskoolka carruurta aan u diri doonin dal kale, kiisana mar hore ku filnaaday
4. Waa daljoog cidna aan u dirayn tikido saaxiibbo dalxiisa iyo martiqaad dibadeed oo aan horay looga baran, hadana laga filayn
5. Waa daljoog dadka kala yaqaan, oo Carshe Dhaqaaje waa yaqaan kan berri Suujta iyo Garmaalta soo socota la safan doona, kan maanta hiilka u baahan, iyo kan dalka iyo dadka wax ugu toorran
Sida aan kor ku soo xusnay, waxa aan si kooban u dulmarnay taariikhda fog iyo tan dhow ee Md. Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje, ee marna ma aynaan tilmaamin timaadada, maxaa yeelay taariikhda baa horay noo bartay “rag wax kasta ka filo!”
Saas oo ay tahay, taariikhdu waxa ay na bartay in ninka ragga ah saanqaadkiisa hore iyo kiisa danbe ay badanaa is leeyihiin. Sidoo kale naynaastu, mid shakhsi ama mid awoowaba, waxay leedahay macno aan sifirin ama beenoobin, sidaas darteed maskax kasta oo caafimaad qabta waxa ay filan kartaa in Md. “Dhaqaaje” uu mar kale dhaqaajiyo Wasaaradda Maaliyadda oo hormar iyo heeggan u hamuun qabta.
Sida Md. Dhaqaaje uu shalay u sheegay ciidamada difaaca Puntland oo yiri, “inta hurudda idinka ayey idin ku huruddaa” ayey saas oo kalena umadda reer Puntland ee “musuqmaasuq iyo sicir-barar” la idha-beelay ayana kuu sugayaan ee “nin lagu seexdoow ha seexan!”
Qormooyinka Daljir 54 Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 26118
Madaxweyne Gaas,”Dagaalka Buuhoodle Waa In Shuruud La’aan Lagu Joojiyaa”
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Dembele waa Barca (dhegayso)
Bile claahi 4 years ago
Amal Bank horay ayuu u socdaaa, wuuna guuleysan doonaa inta uu aqoon isticmaalayo, wuxuuna ku dhiirran doonaa maalgashiga khayraadka dalka soda: kalluunka, xoolaha, fooxa iyo beeyada, dhulka iyo beeraha
cumar maxamed siciid 4 years ago
Amal waa shirkad macaamiisheeda u roon waayo way maalgalisaa oo hanti ku aamintaa sabatuna waa shirkad wadani ah oo doonaysa inay dalkeeda dhisto lana horomariyo waa shirkada kaliya an ku aminay hantidayda ama akoon ku leeyahay sababta aan shirkadaha kale uga doortayna wa shirkad wadani ah waxaana ka rajaynayaa inay illaahayna uga baryayaa inay kornoqoto inahaa allaah amal waligaa ha dhicin